I-OASIS DES TROIS LUCARNES ngokubuka umfula
(405 okushiwo abanye)
Indlu yamadlozi kusukela ngo-1850 ngokubuka umfula. Ifulethi libhaliswe neNhlangano yemboni yezokuvakasha yaseQuebec (CITQ) # 302493, njengoba kunikelwe imithethonqubo yaseQuebec.
Ifulethi litholakala esitezi sesibili ngokungena ezimele, ngihlala phansi. Konke kufakiwe, vele ulethe umoya wakho omuhle !! Itholakala eduze kakhulu nezindawo zezivakashi. Ukufinyelela endleleni yebhayisikili egudla uMfula i-St. Lawrence kanye nepaki elisonqenqemeni lwamanzi.
Ifulethi linendawo yokungena ezimele futhi indawo yokupaka imahhala (egcekeni elingaphandle). Indawo yokuhlala inamagumbi amabili okulala futhi isilungiswe ngezinto ezisezingeni eliphezulu, igcina isimilo esinomlando. Ivinjwe kahle umsindo futhi ifakwe entsha ngokuphelele.
Ifulethi elinesango lokungena elizimele linamakamelo okulala amabili futhi selilungiswe ngezinto ezisezingeni eliphezulu, eligcina uphawu lwamagugu. Ivinjwe umsindo kahle kakhulu futhi ifakwe okusha kubahambi.
4.98(405 okushiwo abanye)
4.98 out of 5 stars from 405 reviews
4.98 · 405 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-405
Njengoba ngihlala efulethini elingaphansi kwendawo eqashisayo, ngitholakala ngempela, kodwa ngezinye izikhathi umsebenzi wami ungikhipha edolobheni. Uma lokho kwenzeka, ngiyohlala ngifinyeleleka ngocingo futhi omunye umuntu uzoba khona lapho kudingeka. Ngivumelana nezimo lapho ngifika nezikhathi zokuhamba.
Njengoba ngihlala esitezi esiphansi endlini, ngitholakala ngempela kodwa ngezinye izikhathi umsebenzi wami ungiyisa ngaphandle. Ngaleso sikhathi, umuntu uzolandela. Ngakho-ke, ngezikhathi zokufika nezokuhamba, sizolungisa.
Njengoba ngihlala efulethini elingaphansi kwendawo eqashisayo, ngitholakala ngempela, kodwa ngezinye izikhathi umsebenzi wami ungikhipha edolobheni. Uma lokho kwenzeka, ngiyohlala…